Vaovao - Inona no atao hoe PIM
PIM, fantatra ihany koa amin'ny hoe Passive Intermodulation, dia karazana fanodikodinan'ny signal. Koa satria ny tambajotra LTE dia mora tohina amin'ny PIM, ny fomba mamantatra sy mampihena ny PIM dia nahazo ny fifantohana bebe kokoa.
Ny PIM dia ateraky ny fampifangaroana tsy miankina eo anelanelan'ny alim-pitaterana roa na maromaro, ary ny famantarana vokatr'izany dia misy onjam-peo fanampiny tsy tiana na vokatra intermodulation. Satria ny teny hoe "passive" amin'ny anarana hoe "passive intermodulation" dia mitovy ihany, ny fampifangaroana tsy mitarika voalaza etsy ambony izay miteraka PIM dia tsy misy fitaovana mavitrika, fa mazàna vita amin'ny fitaovana vy sy fitaovana mifandray. Fanodinana, na singa hafa tsy mandeha amin'ny rafitra. Ny antony mahatonga ny fampifangaroana tsy miankina dia mety ahitana ireto manaraka ireto:
• lesoka amin'ny fifandraisana herinaratra: satria tsy misy faritra malama tsy misy kilema eto amin'izao tontolo izao, dia mety misy faritra misy hakitroka avo kokoa ankehitriny any amin'ireo faritra misy fifandraisana eo anelanelan'ny faritra samihafa. Ireo faritra ireo dia miteraka hafanana noho ny lalan'ny fitarihana voafetra, ka miteraka fiovan'ny fanoherana. Noho io antony io dia tokony hohamafisina tsara hatrany ny mpampitohy amin'ny tselatra kendrena.
• Farafahakeliny sosona oksida manify misy amin'ny ankamaroan'ny velaran-by, izay mety hiteraka vokan'ny tunneling na, raha fintinina, dia mitarika fihenan'ny faritra mitondra. Misy ny olona mieritreritra fa ity trangan-javatra ity dia afaka mamokatra ny vokany Schottky. Izany no antony mahatonga ny bolt na harafesina tampon-trano eo akaikin'ny tilikambo finday mety hiteraka fikafika mahery vaika PIM.
• Fitaovana ferromagnetika: ny fitaovana toy ny vy dia mety hiteraka fanodikodinam-PIM lehibe, noho izany ny fitaovana toy izany dia tsy tokony hampiasaina amin'ny rafitra sela.
Ny tambajotra tsy misy tariby dia nanjary sarotra kokoa noho ny rafitra maro sy ny rafitra isan-karazany ny rafitra nanomboka nampiasaina tao anatin'ny tranonkala iray ihany. Rehefa atambatra ireo famantarana isan-karazany dia mipoitra ny PIM, izay miteraka fanelingelenana ny signal LTE. Antenna, duplexer, tariby, mpampitohy maloto na malalaka, ary fitaovana RF simba sy zavatra vy izay misy eo akaiky na ao anatin'ny tobin'ny finday no mety ho loharanon'ny PIM.
Koa satria ny fitsabahan'ny PIM dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny tamba-jotra LTE, ireo mpandraharaha sy mpandraharaha tsy misy tariby dia manome lanja lehibe ny fandrefesana PIM, ny toerana misy ny loharano ary ny fanakanana. Ny haavon'ny PIM ekena dia miovaova arakaraka ny rafitra sy ny rafitra. Ohatra, ny valin'ny fitsapana an'i Anritsu dia mampiseho fa rehefa miakatra ny haavon'ny PIM manomboka amin'ny -125dBm ka hatramin'ny -105dBm dia midina 18% ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana raha toa kosa ny voalohany sy ny farany Ireo soatoavina roa ireo dia heverina ho eken'ny PIM azo ekena.
Iza amin'ireo faritra no mila sedraina amin'ny PIM?
Amin'ny ankapobeny, ny singa tsirairay dia mandalo fitsapana PIM mandritra ny famolavolana sy ny famokarana mba hahazoana antoka fa tsy lasa loharano PIM lehibe aorian'ny fametrahana azy. Ankoatr'izay, satria ny maha-marina ny fifandraisana dia manakiana ny fifehezana PIM, ny fizotry ny fametrahana dia ampahany lehibe amin'ny fifehezana PIM ihany koa. Ao amin'ny rafitra antenna nozaraina dia ilaina indraindray ny manao fanandramana PIM amin'ny rafitra iray manontolo ary koa ny fanandramana PIM isaky ny singa. Androany, mihombo ny olona mampiasa fitaovana voamarina PIM. Ohatra, ny antennas eo ambany -150dBc dia azo raisina ho fanarahan-dalàna PIM, ary ny famaritana toy izany dia mihamafy hatrany.
Ho fanampin'izany, ny fizotry ny fisafidianana ny tranokala, indrindra alohan'ny hametrahana ny tranokala sy ny antena, ary ny dingana fametrahana manaraka, dia misy koa ny fanombanana ny PIM.
Kingtone dia manolotra fivoriamben'ny tariby PIM ambany, mpampifandray, adaptatera, mpanambatra matetika, mpamono mpiara-miasa matetika, duplexer, mpampisaraka, mpiray tsikombakomba ary antennas hihaona amin'ny takiana samihafa mifandraika amin'ny PIM.